Dhab ahaan, ku dhowaad dhammaan dhaqanka kafeega ee Europe iyo dunida reer galbeedka ka yimaado Italy. Tani waa sababta dhammaan noocyada kala duwan ee qaxwaha aan cabno u leeyihiin magacyada Talyaani.
Waxay ku taal meel daqiiqado yar ’u jirta saldhigyada tareenka Milan ee Talyaaniga maqaaxidan ayaa si sax ah loogu sharaxay magaceeda. Waxaa jira bisadaha marayay agagaarka this cafe raaxo leh halka aad cuno oo wax cabbo. Kafeegaan funky-ga ah ayaa caan ku ah in shaah heer sare ah loogu adeego baalal-qaabeeya bisadda iyo yeelashada keeg macaan. Shaqaalaha waa super saaxiibtinimo iyo in ka badan bisadaha had iyo jeer hurdayaan, waxanuna waa waxa ay jecel yihiin in ay sameeyaan.
Haddii aad raadinayso si ay u arkaan waxa uu yahay sidaas u weyn oo ku saabsan kafeega Talyaani, this meesha in ay soo booqdaan waa. kala duwan ee bunka iyo cuntada fudud oo macmal ah delicious this bar qaxwaha caan ah oo dalxiisayaal ah iyo dadka deegaanka inay ku. Tani waa meel weyn in ay leeyihiin quraac iyo iibiya bunka qaarkood ee Euro ah ama ka yar. dukaan kafeega Tani waa gali karaa kuraasta curyaamiinta, ayaa wifi, waa xayawaanka-friendly, oo wuxuu lahaa bar ah khamriga iyo sidoo kale-dhaansan. A toddobo daqiiqo oo socod ah.
Ballansan aad safar tareen soo socda iyadoo la isticmaalayo Save Tareenku oo arag tareenada badan ee Italy.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcoffee-shops-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)